Modely amin'ny birao maoderina sy akanjo fitafy ho an'ny ankizivavy - akanjo, skirt, sarafan, akanjo, shorts, kiraro, manikika, make-up
Biraon'ny fandefasana sary - 44 sary ny sarin'ny vehivavy lamaody ho an'ny tsirony rehetra
Ho an'ny fitondran-tena tsara, izay mandany fotoana betsaka amin'ny asany, dia lasa zava-dehibe ny lam-birao. Amin'ny tsipika tsara amin'ny akanjo garderie, ny tongolobe dia afaka mitodika tsy ety ivelany, fa tena mahavariana sy kanto ihany koa.
Dress code - birao fiantsenana
Ao amin'ny orinasa maro, ny fomba fanoratana ny birao dia mitaky fitsipi-pifehezana henjana, saingy misy fikambanana izay ahazoana ny fialana amin'ny fitsipika ankapobeny. Ny fepetra fototra amin'ny fisafidianana ireo fitaovana gardrobe dia toy izao manaraka izao:
Ny akanjo sy ny akanjo dia tokony hanana lava izay mifarana amin'ny ambaratongan'ny lohalika, afaka miova kely na kely izany na ambany kokoa, na dia tsy azo avela aza ny mini-miniature fohy.
Raha ny halavan'ny pataloha, ny safidy manara-penitra dia ilay iray izay tonga eo afovoan'ny voditongotra. Na izany aza, ny lamaody maoderina dia ahitana famenoana fohy, mifarana amin'ny haavony midadasika.
Ny pataloha misimisy dia dingana mahitsy, azo avela ary modely modely modely, ilaina ny manilika ny fanamafisana loatra. Jereo tsara amin'ny style with arrows or options.
Ao amin'ny orinasa sasany amin'ny andro farany amin'ny herinandro amin'ny herinandro, voafetra ny nofon'ireo Jeans, misy ihany koa orinasa izay ahafahan'izy ireo misakafo isan'andro. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny birao amin'ny ankapobeny izy ireo, ny tombony dia omena amin'ny vokatra mivantana.
Ny fanampim-panafahana tanteraka amin'ny sary dia akanjo laconic na blouses, ankoatra izay ahafahanao manao akanjo marevaka na jiro. Ho an'ny vanim-potoana mafana dia maingoka somary mareva-doko, blouses, kardigana .
Mpiara-matevina manintona maro no mampiasa ny akanjon'izy ireo ho an'ny tovovavy 2018 ao amin'ny fanangonam-bokany. Misongadina amin'ny endri-javatra toy izany izy ireo:
Taorian'ny fomban-drazan'ny klasika. Izany dia aseho amin'ny fampiharana ny famokarana laconic mpandala ny nentim-paharazana, ny tsy fisian'ny antsipirihany tsy ilaina, ny fanilihana ireo singa mamirapiratra, toy ny rhinestônes, lamosina.
Ny trano hentitra dia tsy misy ny fanatrehana ny fihenam-bidy sy ny fisakafoanana, ny tsangantsanganana mangarahara, ny lava be loatra.
Ny fitomboan'ny fanamafisana dia mametraka ny kalitaon'ny vokatra, noho ny famokarana azy ireo, ny vatosoa voajanahary indrindra no ampiasaina.
Ny tombony amin'ny famafazana dia nomena ireo tononkalo nentim-paharazana, toy ny mainty, mavokely, manga, fotsy, beige. Raha toa ka maniry azy ireo, ny mpahaikanto dia mameno azy ireo amin'ny endritsoratra tsy misy ifandraisany.
Ao amin'ny fanangonana lamaody, ny fomba fiasan'ny birao 2018 ho an'ny vehivavy dia asehon'ny karazan-dakozia maro, izay ahitana ny:
fitafiana elegant, skirt, sarafana ;
kiraro henjana na jeans;
karazana lobaka sy mason-koditra rehetra, mameno ny sary;
jacks sy jacks;
kofehy, kofehy, kardinaly;
pataloha na skirt;
Ny akanjo ivelany dia miseho amin'ny akanjo marevaka, akanjo, akanjo ivelany.
Manao akanjo amin'ny birao
Iray amin'ireo akanjo amidy fiasa amin'ny ankapobeny ny akanjo amin'ny birao. Ao amin'ireo fanangonana lamaody dia misy ny fiovan'ny karazan-javatra toy izany:
Miparitaka be ny akanjo fitafy iray izay manintona amin'ny endrika rehetra, manantitrantitra tsara ny tombontsoa sy ny famahana ny fahadisoana;
Hipoitra tanteraka ny akanjo misy ny ambany, vita amin'ny endrika trapezoid;
Ny ampahany ambany dia mety ho eo akaikin'ilay tarehimarika, na hampirimina;
Ny lambondriaka dia azo sakanana, fa tsy maintsy mandrakotra ny sorony, mandritra ny vanim-potoana maivana, ny vahaolana tsara indrindra dia lava lava lava na manana lava telo. Ny tombontsoa dia omena amin'ny fomba fohy tsotra, ny variana amin'ny ruffles na "flashlights" dia tsara kokoa ny manafoana;
Ny vokatra dia mety ho monophonic, novonoina tamin'ny feo malefaka, ohatra, mainty, mainty, beige, tononkalo. Azo atao ny maka sary, ohatra, ny tranom-borona iray na maramara matevina.
Skirt amin'ny fomba fanorenana
Ny vahaolana tonga lafatra hanamboarana ny fomba fandrafetana birao dia ny karazana karazana karazana. Rehefa mifidy azy ireo dia tokony amporisihina ireto torohevitra manaraka ireto:
Ny malaza indrindra dia ny pensilihazo pensilihazo , izay mety ho tapaka mihintsy na mihozongozona midina;
nipoitra tanteraka ny moron-tongotr'akoho tao anaty vala lehibe na kely;
Ny halavin'ny vokatra midi na maxi dia mahazatra, ny mini dia tsara kokoa ny manala azy;
Ny fomba amam-birao dia mitambatra amin'ny kiraro amin'ny akanjo marevaka na akanjo, akanjo, akanjo. Raha toa ka ny monophonic no ambony, dia ny ampahany ambany kosa dia afaka misorata printy voatokana ary ny mifamadika amin'izany.
Ny fivoahana lamaody farany dia tafiditra ao amin'ny fomba fiasan'ny akanjo ho an'ny vehivavy 2018, tsy ny pataloha, akanjo sy akanjo izay mahazatra ny olon-drehetra ihany, fa koa toy ny akanjo fampakaram-bady tsy ara-potoana ho shorts. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy mahafeno fepetra sasany ireto manaraka ireto:
Ny halavan'ny zavatra dia tsy tokony ho fohy loatra, ny nomena dia nomena ny midi, manatratra ny lohalika na mamarana amin'ny ambaratonga avo lenta;
Manompoa zavatra amin'ny zana-tsipìka izay hanome azy fitsitsiana sy fahamendrehana;
Ny fomba amam-bika elegant dia mamela ny fampiasana ny vokatra monophonic, ary ahitana tsindrim-peo mampitony, ohatra, kaopy lehibe na lavaka lava.
Blouses amin'ny birao
Ny karazana kanto maro dia ampy hamenoana tsara ny fomba fitafin'ny vehivavy ankehitriny. Azonao atao ny manamarika ireo karazan-javatra ireo amin'ny endriny:
Modely henjana ny akanjo marevaka;
misy fehiloha, tsy misy fehiloha, na lava tanana lava, misy ihany koa karazana telo;
Raha ny volo, ny safidy iraisana indrindra dia ny "stand", ny vavahady dia mety tsy ho tapaka ary amin'ny ankapobeny, dia nosoloana ny fisainana oval na triangular;
Mety misy ravinkazo ao amin'ny faritry ny vavahady, manao zavatra toy ny singa miavaka;
Ny loko malaza indrindra dia fotsy, mety misy pastele, akanjo, mainty mainty.
Sarafan amin'ny toeran'ny birao
Zava-bady iray hafa izay hameno ny birao ho an'ny tovovavy dia Sarafan. Misongadina amin'ny endri-javatra toy izany izy io:
Ny mainty dia mena mainty, mavokely, beige, nefa azonao atao ny mitondra ny sary sy ny famirapiratana, raha mifidy manga manga, maitso, mena ianao;
Ny modely sasany dia misy printy ao anaty tranom-borona na bala;
Ny sundress dia mifanentana tsara amin'ny akanjo, akanjo, turtlenecks manao akanjo ambony;
Azo atao ny mikambana eo anoloana na manana kapila iray tapaka iray;
Ny ampahany ambany dia mety mahitsy na mivelatra.
Fitafy vehivavy ao amin'ny tranoben'ny birao
Maro ny vehivavy maniry ny hampiofana ny birao hentitra amin'ny akanjo. Azo atao amin'ny fiovàna izany:
pelatanana, misy pataloha mitombo, mahitsy, mifoha amin'ny lava mahazatra na fohy;
akanjo, misy jiro mivantana na midi na maxi lava;
Ireo jirobe na jirobe dia mety ho fohy na lantotra midadasika, ny modely sasany dia ampitaina amin'ny akanjo.
Karazana birao ho feno
Ny tompon'ny endrika mahafinaritra dia afaka manisy fetrany amin'ny tsy misy na inona na inona ary mampiasa ny birao ho an'ny ankizivavy feno. Misy karazany toy izany izy io:
Ilaina ny manaisotra ny lamosina sy ny marefo, tsara kokoa ny mampiato ny safidy amin'ny vokatra mivantana, mipetraka tsara tarehy;
Raha ny modely amin'ny akanjo, dia mijery tsara amin'ny tranga iray manontolo izy ireo, lamaody miaraka amin'ny tadiny efa tonta na akanjo miaraka amin'ny fofona;
Ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny skirt dia ho toy ny pensilihazo sy taona;
Ny tombony fanampiny amin'ny rongony na ny pataloha dia tery lava be loatra, izay manampy amin'ny fanafenana ny kibay be tabilao;
Ho an'ny vanim-potoana mafana dia tonga lafatra ny paompy monophonic miaraka amin'ny akanjo "bat".
Ny akanjo ho an'ny lava izay mahatratra ny afovoan'ny feny.
Kiraro amin'ny birao eo amin'ny birao
Ny fampiaraham-barotra ankapobeny amin'ny akanjo rehetra dia ho kiraro, ny fomban-trano dia manome azy ireo fepetra henjana, izay toy izao manaraka izao:
Ny halatra dia mifamatotra amin'ny hakantony sy ny maha-vehivavy, na izany aza, mankany amin'ny birao izay mila mifantoka be loatra amin'ny safidiny. Tsy tokony ho avo loatra izy ireo, ny vahaolana tonga lafatra dia ny foitra miditra. Mety ho malalaka, na miorim-paka na tery izy, toy ny valala.
Ny akanjo anaovan'ny tovovavy dia manolo-kevitra fa afaka mampiasa kapa ianao mandritra ny vanin-taona amin'ny fahavaratra, saingy ny fepetra dia tokony hikatona ny faritra misy ny tongotra.
Ny modely malaza indrindra dia kiraro amin'ny sambo miaraka amin'ny menaka fisaka na volon'ondry kokoa.
Ho an'ny fizaran-taona amin'ny lohataona sy ny ririnina, dia boots, kiraro, kiraro ankapobeny amin'ny volonkoditra ankapobeny, kodiarana na sehatra kely.
Manicure amin'ny fomba fanorenana
Ny fanarahan-danja amin'ny akanjo fitafy dia mitaky ny famolavolana ny famolavolana fanalahidy, ny trano fanoratana dia tokony ampiana am-bava. Mba hanaovana izany, dia mety tsara ny karazana art nao:
Ny fampiasana loko mifehezana tsy misy fotony, fotsy, fotsy, beige, ary pastel dia tena tsara;
Ny tena manantitrantitra dia ny politique nail;
Ny safidy handresy dia hanamboatra manikana frantsay, raha ny tendron'ny fantsika dia azo atao amin'ny loko isan-karazany, ary ny fototra dia afaka miloko na mangarahara;
Ny art nail lunar koa dia mijery ny laza malaza amin'ny vehivavy mpandraharaha;
Ny famolavolana ny fantsika dia mety ho monophonic na mampiasa karazan-tsoratra, ohatra, singa kesika, firavaka firavaka, tsipika geometrika;
Mitovy amin'ny manicure mahaliana, izay ampiasaina amin'ny lamosina tsotra na mangarahara ny lamina.
Manaova fanoratana amin'ny birao
Ny famoronana birao iray ho an'ny vehivavy dia zava-dehibe ny fijerena ny antsipiriany rehetra. Izany dia mirakitra ny fampiharana ny makia, izay tokony hifanaraka amin'ny sary ankapobeny, izay amporisihina ny handraisana fotoana toy izao:
Tokony hosakanana ny fanaovana make-up, tsy mitongilana;
Ilaina ny manaisotra ny fisian'ny aloky ny aloky ny mazava na ny haizim-pitaratra, ny vahaolana tsara indrindra dia ny miboridana, ny loko maitso maitso;
Ny lipstick dia tsy tokony ho mavokely loatra, maivana mavokely, moana maitso moana;
Raha ampiasaina ny fototra , dia tokony hifanakaiky araka ny azo atao amin'ny fomba voajanahary ny hoditra. Fitsipika momba ity pejy ity
Tokony hampifantoka amin'ny ampahany iray, ohatra, ny fakantsary na ny fijerena maso ny maso dia tokony ho ny maso na ny molotra.
Photoshoot amin'ny fomba milamina
Mpitsabo mpanampy amin'ny Halloween
Amin'ny inona no tokony hikorontana ny kiraro?
Photoshoot amin'ny Halloween
Fitaratra an-dranomasina amin'ny akanjo - ahoana no ahafahana mamorona lamaody?
Hevitra ho an'ny sary amin'ny ririnina
Ahoana ny fomba hampifandraisana ireo kiraro, kiraro, kiraro?
Boky amin'ny siramamy
Mandritra ny ranomaso: ny mpaka sary dia nampangotraka ny Internet miaraka amin'ireo ankizivavy tia antitra!
Teboka fotsy amin'ny tendrontany
Ora - karazana fanasokajiana
Sandany misy orona mihidy
Medikaly ho an'ny osteochondrosis
Andro iraisam-pirenena ho an'ny UFO
Ahoana ny fomba hanamboarana manti?
Ny zanakavavin'i Bruce Willis sy Demi Moore dia nanao fety niaraka tamin'ny tratran'ny volom-borona